चिनीको मूल्यमा चरम बेथिती : ७३ रुपैयाँ किलोको चिनी ९० रुपैयाँमा बिक्रि गर्दा सरकार किन मौन ! | शुभयुग
चिनीको मूल्यमा चरम बेथिती : ७३ रुपैयाँ किलोको चिनी ९० रुपैयाँमा बिक्रि गर्दा सरकार किन मौन !
शुभयुग संवाददाताप्रकाशित मिति: २०७७ आश्विन ९, शुक्रबार (१ साल अघि)
९ असोज काठमाण्डौं – सरकारले, सरकारी स्वामित्वका संस्थान मार्फत पर्याप्त चिनी खरिद गरी बजारमा हस्तक्षेप गर्न नसक्दा चिनीको मूल्यमा चरम बेथिति देखिएको छ ।
व्यापारीले मनोमानी रूपमा चिनी बिक्री गर्दा आम उपभोक्ता ठगिएका छन् । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ७३ रुपैयाँ किलोमा बिक्री गरेको चिनी खुला बजारमा भने व्यापारीहरले ९० रुपैयाँसम्म लिने गरेको उपभोक्ताहरुले गुनाशो गर्ने गरेका छन् । उपत्यकाका केही मार्ट, डिपार्टमेन्टल स्टोर्सले भने ८० देखि ८५ रुपैयाँमा चिनी बिक्री गरिरहेको छ । तरकारीजस्तो चिनी सड्ने, गल्ने वस्तु नभएकाले मूल्यमा एकरूपता हुनुपर्ने भएपनी सरकारले अनुगमन नगर्दा यस्तो समस्या आउने गरेको उपभोक्ताको गुनाशो छ ।
उद्योगी र व्यापारीको मिलेमतोमा चिनीमा उपभोक्ता सधैं ठगिएको खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘साल्ट ट्रेडिङमा सस्तो भए पनि मागेजति दिएको छैन,’ श्रेष्ठले भने । ‘ठूला व्यापारीको मिलेमतोमा चिनीमा खेल भइरहेको छ ।’ खुद्रा किराना पसलले ८५ देखि ९० रुपैयाँमा चिनी बिक्री गरिरहेको श्रेष्ठले बताए।
सरकारको लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चिनी स्टक राखेर हस्तक्षेप गर्न नसक्दा उपभोक्ता ठगिएका हुन् ।
अहिले बजारमा चिनी किलोको ७३ रुपैयाँदेखि ९० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । यो खवर आजको नागरिक दैनिकमा दिलीप पौडेलले लेखेका छन्।